Ikhabhinethi epholileyo, yale mihla yasehlathini enombono omhle wolwandle - I-Airbnb
Ikhabhinethi epholileyo, yale mihla yasehlathini enombono omhle wolwandle
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguGisela
Isitudiyo esinempahla emnandi (25 m2) enebhedi yaseQueensize, ikhitshi, igumbi lokuhlambela langoku kunye nomgangatho wabucala (6 m2), i-AC kunye nefeni. Indawo yokupaka yabucala enomthunzi kufutshane nendlu. Icabaña yakhiwe endulini = izinyuko ukusuka kwindawo yokupaka ukuya endlwini ukuya echibini kwaye inika umbono wolwandle ngokutshona kwelanga okumangalisayo. Inkulu, i-13 m ubude be-lap pool. Iilwandle ezi-3 ezintle zikumgama wokuhamba olula enye yazo yiPlaya Morrillo, eyona nto ibalaseleyo kuye wonke umntu othanda ukusefa. Mininzi eminye imisebenzi yangaphandle kule ndawo.
Indawo efanelekileyo kubathandi bendalo kunye nemisebenzi yangaphandle. Zininzi izilwanyana zasendle ezijikeleze i-cabaña, iiprojekthi zokuhlangula ufudo, ukubukela iminenga. Kufuphi iPlaya Morrillo yiparadesi yabasenzi..
Sihlala kwipropathi enye kwaye siyakuvuyela ukufumaneka kuwe nanini na kufuneka.
Ngokuxhomekeke kwixesha lonyaka kukho iindawo zokutyela ezininzi ezilungileyo ebumelwaneni, kwilali elandelayo iTorio okanye eMariato.
Unxweme lwaseAzuero Sunset - oko kuthetha indalo kunye neentlobo ngeentlobo zezinto eziphilayo. Inika ukhenketho lwempilo entle kunye nolwandle olunesithukuthezi kunye nesibhakabhaka esimangalisayo esineenkwenkwezi ngaphandle kongcoliseko lokukhanya. Ngaphandle kokonwabela iilwandle ezintle, kukho i-adventure eninzi kwindawo efana nokutyelela i-Cerro Hoya National Park okanye ukunyuka ukuya kwenye yeengxangxasi ezi-6. Jonga ukukhululwa kweentlobo ze-4 zeentsana ze-turtles kwi-Playa Mata Oscura okanye i-Malena okanye ubukele ii-turtles ziza elunxwemeni ebusuku, zihlolisise i-mangroves okanye zifunde kwintsapho yasePanamani ukuba icutshungulwa njani ishukela. Thatha ukhenketho ngesikhephe kwaye uye kubukela iminenga, ujonge iziqithi okanye uye kwi-snorkelling. Funda indlela yokusefa, uphonononge ummangaliso wendalo kwibhodi yokubheqa, kwikayak okanye ukukhwela ihashe. Ukuphumla emva kwayo yonke into eyenziwayo ukuthotywa nge-massage yokuphumla okanye ujoyine iklasi ye-yoga.
Umbuki zindwendwe ngu- Gisela
Siyabuhlonipha ubumfihlo bakho kwaye asiyi kuphazamisa ngaphandle kokuba ufuna uncedo lwethu okanye uzive ufuna ukuncokola kancinci. Ungalibazisi ukuqhagamshelana nathi nanini na. Sikwayavuya ukukunika iingcebiso malunga nento omawuyiphonononge kwaye ungaya phi eAzuero Sunset Coast entle.
Siyabuhlonipha ubumfihlo bakho kwaye asiyi kuphazamisa ngaphandle kokuba ufuna uncedo lwethu okanye uzive ufuna ukuncokola kancinci. Ungalibazisi ukuqhagamshelana nathi nanini na.…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Torio